वेब पेज स्क्रैपिंग मा सेल्टल्ट देखि शुरुकर्ता को गाइड
वेबमा डेटा र जानकारी बढ्दै गएको छ। आजकल, अधिकांश मानिसहरूले Google को ज्ञानको पहिलो स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्छन्, चाहे उनी व्यवसायको बारेमा समीक्षा खोज्दै वा नयाँ शब्द बुझ्न खोज्दैछन्।
वेबमा उपलब्ध डेटाको मात्रामा यसले डाटा वैज्ञानिकहरूको लागि धेरै अवसरहरू खोल्छ। दुर्भाग्यवश, वेबको धेरै डाटा सजिलै उपलब्ध छैन। यो एक असंगत ढाँचामा प्रस्तुत गरिएको एचटीएमएल ढाँचा अनुसार उल्लेख गरिएको स्वरूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन। यसैले, यसको प्रयोग गर्न डेटा वैज्ञानिकको ज्ञान र विशेषज्ञता चाहिन्छ।
वेब स्क्रैपिंग एचटीएमएल ढाँचामा हालको रूपान्तरण ढाँचामा डाटा परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया हो जुन सजिलै पहुँच र प्रयोग गर्न सकिन्छ। लगभग सबै प्रोग्रामिंग भाषाहरू उचित वेब स्क्रैपिंगका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यद्यपि, यस लेखमा हामी आर भाषा प्रयोग गर्नेछौं।
त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जुन डेटा वेबबाट स्क्रैप गर्न सकिन्छ। केही लोकप्रियहरूमा निम्न समावेश छन्:
(1 9) 1. मानव प्रतिलिपि-पेस्ट
वेबबाट डेटा स्क्रैप गर्न यो एक ढिलो तर धेरै कुशल प्रविधि हो। यस प्रविधिमा, व्यक्तिले उसलाई डेटाको विश्लेषण गर्दछ र त्यसपछि स्थानीय भण्डारणमा प्रतिलिपि बनाउँछ।
( 1 9) 2. पाठ ढाँचा मिलान
यो वेबबाट जानकारी निकाल्न अर्को सरल तर शक्तिशाली दृष्टिकोण हो। यसले प्रोग्रामिंग भाषाहरूको नियमित अभिव्यक्ति मिल्ने सुविधाहरू प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
(1 9) 3. एपीआई इन्टरफेस
धेरै चहचहाना वेबसाइटहरू ट्विटर, फेसबुक, लिंक गरिएको इन्टिभेसन आदि। तपाईलाई सार्वजनिक वा निजी एपिआईहरू प्रदान गर्नुहोस् जुन निर्धारित कोडमा डेटा पुन: प्राप्त गर्न मानक कोडहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ।
(1 9) 4. डोम पार्सिङ ( 20)
याद गर्नुहोस् कि केहि कार्यक्रमहरूले ग्राहक-साइड लिपिहरू द्वारा निर्मित गतिशील सामग्री पुन: प्राप्त गर्न सक्दछ। यो पृष्ठहरू DOM रूखमा पार्स गर्न सम्भव छ जुन तपाईंले ती पृष्ठहरूको केहि भागहरू पुन: प्राप्त गर्न प्रयोग गर्ने प्रोग्रामहरूमा आधारित छ।
आर मा स्क्रैपिंग वेब मा लगने देखि पहिले, तपाईंलाई आर मा एक बुनियादी ज्ञान हुनु पर्छ यदि तपाईं एक शुरुवात हो भने, त्यहाँ छन् धेरै महान स्रोतहरू मद्दत गर्न सक्छन्। साथै, तपाईंलाई HTML र CSS को ज्ञान हुनु आवश्यक छ। तथापि, किनकि धेरै डेटा वैज्ञानिकहरू एचटीएमएल र सीएसएसको प्राविधिक ज्ञानसँग धेरै आवाजहरू छैनन् किनकि तपाइँ चयनकर्ता ग्याजेटको रूपमा खुला सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
उदाहरणका लागि, यदि तपाईं दिइएको दिइएको सबैभन्दा धेरै फिलिममा 100 भन्दा लोकप्रिय लोकप्रिय फिल्महरूको लागि IMDB वेबसाइटमा डेटा स्क्रैप गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँलाई साइटबाट निम्न डाटा स्क्रैप गर्न आवश्यक छ: वर्णन, रनटाइम, शैली, दर्जा, मतदानहरू , सकल कमाई, निर्देशक र कास्ट। एकपटक तपाईंले डेटा खरिद गर्नुभए पछि, तपाईं यसलाई फरक तरिकामा विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि, तपाईं धेरै रोचक दृश्यहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईसँग जब तपाईको डेटा को डेटा स्क्रैपिंग को सामान्य विचार छ, तपाईं यसको वरिपरि अपना रास्ता बना सकते हो!